အဖြူရောင်ခံစားမူလွင်ပြင်: လောကသာရ ဆုံးမစာမှ…
အဖြူရောင်လွင်ပြင်အား လာရောက်လည်ပတ်သူများ ရေလိုအေးလို့ ပန်းလိုလန်းဆန်းနိုင်ကြပါစေဗျာ
ပညာမျက်စိ၊ မြင်မရှိ၍၊ မသိတရား၊ ယူများလျက်၊ ကြီးပွားမမျှော်၊ ကျိုးမပေါ်သား၊ သူတော်မဟုတ်၊ ယုတ်သည့်စရိုက်၊ လူဆူမိုက်နှင့်၊ မကြိုက်အချစ်၊ ရန်သူစစ်သို့၊ မချစ်ကြိုက်ဘဲ၊ ဝေးစွာရှဲ၍ အမြဲခွာရှင်း၊ ဖဲကြဉ်မင်း။
လူကြီးမိဘ၊ ဆရာစကား၊ စုိုးရသခင်၊ ကျေးဇူးရှင်သို့၊ ပြစ်တင်မောင်းမဲ၊ ရိုက်ပုတ်ဆဲလည်း၊ ၀မ်းထဲရုံ့ရုံ့၊ ယုန်လျှင်ကျုံ့သို့၊ ဆိုတုံ့မ၀ံ့၊ ဆောင်းမာန်ညံ့၍၊ ကြောက်ရွံ့ရိုသေ၊ သည်းခံတွေဖြင့်၊ ကောင်းစေနှလုံး ယဉ်စေမင်း။
မိခင် ဖခင်၊ ကျေးဇူးရှင်ကို၊ ချစ်ခင်မြတ်နိူး၊ ဂူပုထိုးသို့၊ ရှိခိုးဦးတင်၊ ကြည်လင်လေး၊ သိမ်းမြန်းမွေး၍၊ လုပ်ကြွေးခယ၊ ရိုတုပ်ကွလျက်၊ ကြီးထသက်အို၊ မျိုးဆွေကိုလည်း၊ တင်ကြိုညွတ်သိမ်း၊ ပိုက်ထုပ်သိမ်း၍၊ မငြိမ်းစဉ်းလျဉ်း၊ ငြိမ်းစေမင်း။
အသက်ရှည်ရာ၊ အနာမဲ့ကြောင်း၊ ကောင်းလှစေချင်၊ ပဲ့ပြင်နိစ္စ၊ ကွပ်ဆုံးမသား၊ မိဘဆရာ၊ စကားနာ၍၊ ကျမ်းစာသိမြင်၊ တတ်အောင်သင်လော့၊ ပေါ်လွင်မပြု၊ ကောင်းရာတုလျက်၊ ကောင်းကောင်းမူမြတ်နိူး၊ ကောင်းအောင်ကျိုး၍၊ ကောင်းကျိုးကိုယ်၌ တည်စေမင်း။
Posted by မြတ်ကိုဦး at 8:49 PM
It's me,Myat Ko Oo. :)
free proxy software (1)
အစွမ်းထက်ဗုဒ္ဓဝင် ဂါထာတော်များ (1)
(c)2009 အဖြူရောင်ခံစားမူလွင်ပြင် . Blogger Templates created by Deluxe Templates. Blogger Blog Templates